Borlänge oo Mideynta Qoysaska Qaxootigaa Ka cabanaysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soomali badan oo dhex lugeynaysa xaafadd ay ku badanyahiin magaalada Borlänge. Sawirle:Warsame Elmi
Borlänge oo Mideynta Qoysaska Qaxootigaa Ka cabanaysa
La daabacay fredag 25 maj 2012 kl 13.40
Qoysaska soomalida qaxootigaa ee kala irdhoobay ayaa la filayaa in dib loogu mideeyo dalkaan Sweden. Sida ay mujinayso tirokoob ay shaacisay laanta socdaalka migrationsverket waxa la filayaan in ay Sweden imaadan 20 000 oo qof oo soomaaliya labadaan sanno ee soo socda.
Inta badan dadkaan ayaa deegaan ahaan u degi doona degmooyinka yaryar ee dalkaan halkaas oo ay maantay ku noolyahiin qoysaskooda jooga dalkaan. Daraasad ay idaacada caalamigaa ee radio Sweden ku samaynay 30 degmo ee ay somalida u badantahay ayaa muujinaya in dhaqaalaha ay dowladda ku siiso degmooyinka, qaabilaada qaaxootiga aysan ku filnay. Boqolkii 90 demooyinka ayaa ku jawaabay maya mar ay ka jawaabayeen su'aal ahayd: ma filaysaan dhaqaalaha dowladda idin ku siiso qaabilaada in ay ku filanaan karto qaraska ku bixi doona dadka idiin soo socda.
Degmada ay waqtiyaadan aad u soo degaan soomalida dalka ku cusob waxa weeyan Borlänge oo ku taal gobalka Dalarna. Wariyaheena Warsame Elmi ayaa booqasho shaqo ku tagay degmadaas warbxintaan aad hoos ka dhgaysan kartidna nooga soo diyaariyey.